I-Apricot Yasendle: Ipulatifomu Yobulungu Obukhokhelwa Konke | Martech Zone
Njengoba izinhlangano zibheke esikhathini esizayo, ithuba elilodwa ukwakha izinhlangano zobulungu ezikhokhelwayo. Izinhlangano, okungeyona inzuzo, izisekelo, amakilabhu, amaqembu ezemidlalo, amaqembu okuqeqesha, namakamelo ezentengiselwano konke kudinga amapulatifomu ukuphatha ubukhona bawo bedijithali, umphakathi wezokuxhumana, imicimbi, okubhaliselwe, izinkomba, nezitolo eziku-inthanethi.
Wild Apricot kade waba ngumholi kule mboni, enepulatifomu engaphandle kwebhokisi yokuphatha noma yiliphi ibhizinisi lesitayela sobulungu esikhokhelwayo. Izinhlangano ezingaphezu kuka-30,000 zisebenzisa i-Wild Apricot ukuheha, ukuzibandakanya nokugcina amalungu azo.
Izici Zepulatifomu Yobulungu be-Apricot Bufaka:
Izicelo Zobulungu - Isoftware yokuphatha ubulungu beWild Apricot iyisebenzisa ngokuphelele inqubo yokufaka isicelo ukusiza ukunika amalungu akho amasha umbono omuhle wokuqala. Sika amaphepha ayinkimbinkimbi ngokwakha ifomu elisuselwa kuwebhu, elisebenziseka kalula lapho abafakizicelo benganikeza lonke ulwazi oludingayo bese bekhokha online ngekhadi lesikweletu.
Ukuvuselelwa Kobulungu - Nciphisa umsebenzi wakho wokuphatha ngokunikeza izinketho zokuzenzela umsebenzi kumalungu: angavuselela ubulungu bawo khona lapho ngokungena kuphrofayili yawo. Bangabuyekeza ngokuphepha imininingwane yabo yokuxhumana, babhalisele imicimbi, futhi bakhokhe ubulungu obufanele kukhompyutha yabo noma kudivayisi yabo ephathekayo.
Idathabheyisi Yamalungu - Amavolontiya namalungu ebhodi angafinyelela ku-database efanayo online, futhi izibuyekezo kumarekhodi akho amalungu zenzeka ngokushesha, ngakho-ke idatha yakho ihlale isesikhathini. Ungangenisa imininingwane yelungu lakho kuspredishithi futhi wenze ngokwezifiso i-database ukuze ihambisane nezidingo zakho.
Uhla lwemibhalo lobulungu - Noma ngabe udala umkhombandlela womphakathi wamabhizinisi amalungu akho, noma wakhe umkhombandlela kuphela ongabonwa amalungu akho, ungalawula ukuthi yiluphi ulwazi umkhombandlela ngamunye olukhombisa. Futhi noma ngabe iwebhusayithi yakho yakhiwe ku-Wild Apricot noma kwenye ipulatifomu, ungashumeka kalula izinkomba zamalungu ezisebenziseka kalula kwiwebhusayithi yakho.
Iwebhusayithi Yobulungu - Ungakha iwebhusayithi entsha esebenziseka kalula ngomakhi wokuhudula nokudonsa weWild Apricot, noma engeza izici zobulungu kuwebhusayithi yakho ekhona ngokushumeka amafomu ezicelo zobulungu, izinkomba, nokufakwa kuhlu kwemicimbi njengamawijethi. Vele, leli sayithi lifaka womabili amabhulogi nezinkundla zokubandakanya amalungu akho.
Amakhasi Amalungu Kuphela - Ungakha ukuzibandakanya kwamalungu ngokunikeza ukufinyelela kumakhasi ewebhu akhethekile amalungu kuphela, njengezithangami zokuxhumana kanye namabhulogi akhethekile. Ungenza futhi ngezifiso ukuthi yimaphi amazinga welungu noma amaqembu ofuna ukufinyelela kuwo ikhasi ngalinye.
Ukuphathwa Kwemicimbi - Ukubhaliswa kwemicimbi eku-inthanethi kukhipha imicimbi emisha. Kungakapheli nemizuzu ungakha uhlu olunemininingwane lomcimbi olunencazelo nezithombe, kanye nefomu lokubhalisa lomcimbi eliku-inthanethi. Imicimbi yakho izofakwa ohlwini ngokuzenzakalela kukhalenda esizeni sakho se-Wild Apricot noma iwebhusayithi ekhona ngakho-ke akudingeki ukuthi uphinde ufake imininingwane, futhi amalungu akho angabuka umcimbi ku-intanethi kusuka kuselula noma kukhompyutha.
Izinkokhelo ezihambisana ne-PCI - Isoftware yokucubungula inkokhelo ye-Wild Apricot isusa ikhanda ekwamukeleni nasekulandeleni izinkokhelo nokuphatha izimali zenhlangano yakho. Amalungu akho nabasekeli bakho bangakhokha ku-inthanethi kusuka kukhompyutha yabo noma idivayisi yeselula ngezimali zobulungu, imali yokubhalisa, kanye neminikelo, noma basethe izinkokhelo eziphindaphindwayo ukonga isikhathi nobunzima. Futhi ungasetha izintela zokuthengisa eziningi noma i-VAT ngokuchofoza nje okumbalwa, bese uzisebenzisa ngokuzenzakalela kokuthengiselana okuku-inthanethi kunoma yikuphi ukuhlanganiswa okukhethayo. Izinkokhelo ze-Wild Apricot inikwa amandla yi-AffiniPay, umhlinzeki wezixazululo zokukhokha onolwazi lweminyaka engu-15.
Ukukhokha - Uma inkokhelo eku-inthanethi isiqinisekisiwe, irekhodi lokukhokha liyazenzekela, bese i-invoyisi ehlobene nayo ivuselelwa. Futhi ungasetha ezinye izenzo ezizobangelwa, kufaka phakathi ukwenza ubulungu kube lula noma ukuthumela ama-imeyili amukelekile, amarisidi wokubhalisa emcimbini, noma iziqinisekiso zeminikelo.
Ukubika ezezimali - Ngemibiko yezezimali ye-Wild Apricot, ungathola isithombe esiphelele sezimali zenhlangano yakho ngaphandle kokudinga amaspredishithi amaningi. Ungarekhoda izinkokhelo ezenziwe ngokheshi bese ubheka i-Wild Apricot kanye nezinkokhelo ezenziwa online, ngakho-ke yonke idatha yakho yokukhokha isendaweni eyodwa. Ungathumela futhi idatha yakho yezezimali ku-Excel noma ku-QuickBooks.
Iminikelo eku-inthanethi - Shintsha iwebhusayithi yakho ibe yithuluzi elinamandla lokuqongelela imali. Ngokusebenzisa isoftware yethu yokucubungula inkokhelo online ungasetha kalula ikhasi leminikelo kuwebhusayithi yakho, ukuze izivakashi zesiza sakho zikunikeze uxhaso lwezezimali oludingayo kusuka noma ikuphi.
imeyili Marketing - Yakha ama-imeyili abukeka njengochwepheshe kusuka kumathempulethi wethu aphathekayo futhi athumele inani elingenamkhawulo lama-imeyili. Shicilela ifomu lokubhalisa le-newsletter kuwebhusayithi yakho, noma uqondise ama-imeyili akho ngokwakha uhlu lwabemukeli ngokususelwa kunoma yiziphi izindlela, njengezinga lobulungu noma ukuya emcimbini. Ungalandelela ukuthi isebenza kanjani imikhankaso yakho ye-imeyili ngezibalo ekulethweni, ekuvuleni, nasezixhumanisweni ezichofozwa kuwo wonke umyalezo nakuwo wonke oxhumana naye.
Ama-imeyili Ozenzakalelayo - Sebenzisa isikhathi esincane ngokuthumela ama-imeyili ngokwenza ukusethwa kokuqinisekiswa okuzenzakalelayo kwe-imeyili nezikhumbuzi zobulungu, imicimbi, neminikelo. Ungaqinisekisa ukuthi amalungu akho asathola isipiliyoni esenziwe ngokwezifiso ngokwenza ngokwezifiso imilayezo nangokusebenzisa ama-imeyili macros (afana nezinkambu zokuhlanganisa imeyili).
Administrator Ucingo Lokusebenza - Phatha obufana futhi urekhode izinkokhelo kusuka kudivayisi yakho yeselula ngohlelo lokusebenza lwamahhala lwe-Wild Apricot lwabaphathi. Ngemicimbi, ungaphatha oxhumana nabo kanye nababhalisi bomcimbi wokungena kusuka kudivayisi yakho yeselula.
Imicimbi Mobile App - Siza amalungu akho ukuthi axhumane namanye noma umphakathi ngokusebenzisa izinkomba zamalungu eziningi ezihlala zisesikhathini.
I-WordPress Plugin nokungena ngemvume okukodwa - Uma usebenzisa isiza se-WordPress, ungasebenzisa futhi i-Wild Apricot ukungena ngemvume okukodwa, ukufaka amawijethi, nokukhiya okuqukethwe kwamalungu kuphela.
Zama i-Apricot yasendle mahhala izinsuku ezingama-30
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- Wild Apricot
Tags: ukuphathwa kwenhlanganoizinhlanganoukuphathwa kweklabhuamakilabhuezokuhweba ngekhompyuthaukubhaliswa komcimbiukuphathwa kwesisekeloizisekeloipulatifomu yobulunguisoftware yobulunguukuphathwa okungenzi nzuzookungenzi inzuzoamaqembu ezemidlaloukuphathwa kwezemidlaloipulatifomu yewebhusayithi yokuqeqesha